1. 'Bitcoin', lacagta dhijitaalka ah ee adduunka cusub Noocee ah maalgashi ayaa heli doona faa'iidada ugu badan! Haddii dhowr iyo toban sano ka hor Qof ayaa kuu sheegaya inay jiri doonto lacag ka madax bannaan hay'ad kasta oo dawladeed. Laakiin caan bay noqon doontaa isticmaalka oo dhan Kaas oo leh khidmadaha lacag-bixinta ee ka hooseeya kuwa bangiyada la bixiyo Waad qosli lahayd oo ma rumaysanaysid. Laakiin maanta waa la caddeeyay inaad wax walba iibsan karto. Sidoo kale waxay si layaableh ugu abaalmarinaysaa qaab lacag ah oo loo yaqaan 'Bitcoin'. Seeraar Waa maxay Bitcoin? Bitcoin waa lacag dijitaal ah. Waxaa lagu sameeyay kumbuyuutarro. Taas oo ah lacag aan la taaban karin Ma jiro wax qaab ah oo aan u arki karno sida lacagta lagu shubo ama lacagta birta ah. Waa nidaam aan xarun lahayn. Ma jiro qof iska leh. Laakiin waxaa loo isticmaali karaa halkii lacag ahaan looga adeegan lahaa khadka tooska ah ee nidaamka bixinta qaraabada. Oo loogu yeedhay lacagtan "Cryptocurrency"
2. Si aad lacag u yeelato, waa inuu lahaadaa boorso, taasi waa lacag Haddii aad rabto inaad lacag hesho, waxaad u baahan doontaa inaad hesho jeeb wanaagsan, oo yeelan doona shaqo la mid ah koontada bangiga. Waxaan keydinaa bitcoins ka hor intaanan qarash gareynin. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo boorsooyin ah - Boorsada Coinbase waa jeeb si fudud loo isticmaali karo shaashadda taleefanka casriga ah. Waxay ku taageeri doontaa labadaba macruufka iyo Androind xisaabta bangiga. Dheeraad ah, adeegga sarrifka Bitcoin wuxuu u yimaadaa lacag dhab ah wuxuuna bixiyaa caymis lacag ah - Mycelium waa codsiga jeebka ugu caansan ee taleefannada casriga ah. Waxay taageeri kartaa teknoolojiyada cusub sida qalabka keydinta ee Trezor, Tor iyo Bitcoin sidoo kale - - Electrum jeebkaani waa barnaamij loo adeegsado kumbuyuutarka. Wuxuu la yimaadaa nidaam sir-sugid heer sare ah. Si aad u badan u ilaaliso bitcoins badan
3. Sida loo helo Bitcoin
4. Bilaash bilaash ah bilawga Ma ahan nasiib badan, oo awood u leh inuu ka helo bitcoin bilaash ah degel aamin ah oo lagu kalsoon yahay. Taas oo ay tahay in si taxaddar leh loo hubiyo Sababta oo ah badankood way is khiyaanayn doonaan Webka runti la qaybiyo waa sida https://freebitco.in Kaas oo geli kara oo dalban kara oo ka heli kara cinwaankeena Seeraar degel kasta oo ku yaal Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro ama Huobi.co.th si loo buuxiyo loona xajiyo Seeraar si joogto ah saacad kasta, iyadoo la gaarayo xaddiga ugu yar. Goorma U wareejin karaa jeebkayaga
5. Ganacsiga khadka, halkaas oo aan ka iibsan doonno bitcoin ka baht, waxaan ku sameynaa Thailand, degelkooda, Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro ama Huobi.co.th ayaa noo oggolaan doonta inaan dalbanno xaqiijinta aqoonsiga, u wareejinta baht Xisaab geli oo ka iibso bitcoin ganacsade si aan annaga uga mid noqonno. Waxay kuxirantahay inaad doorbideyso inaad lacag heysato dhowr sano, ama waad ka ganacsan kartaa Bitcoin oo waad ka ganacsan kartaa baht sidoo kale, laakiin sidoo kale waxaa jira khatar. Sababtoo ah suuqyada 'crypto' ayaa furan markasta.
6. Waxyaabaha gaarka ah ee xiisaha leh ee Bitcoin waa in loo daadin karo sida dahabka qaab dijitaal ah. Sababtoo ah waxaa loogu talagalay inay yeelato wadar ahaan 21 milyan, intaas ka badan ma jiri karto. Marka waa inaan isticmaalnaa farsamooyinka macdanta. Waa in lagu qodaa qalabka qalabka Kaas oo qodisyahankan laga iibsan karo internetka Kaliya deji, ku xir, bixi biilkaaga oo ka tag. Waxay noo sii qodaysaa qadaadiic dijitaal ah.
7. Hab kasta oo lagu maalgeliyo Bitcoin way ka duwan tahay. Ma awoodo inaan xukumo midka ugu fiican Laakiin waxaa muhiim ah in si joogto ah loo barto faahfaahinta iyo isbeddellada lacagaha lamaanaha ah. Si looga caawiyo qandaraaska macaashka si sax ah waqti xaddidan. Iyo inaad hesho natiijooyinka ugu fiican adiga